Nisy lavaka matotra hita tao amin'ny indostrian'ny fihenam-bidy vondrona izay mbola tsy resy. Ny fitarainana avy amin'ny orinasa mampiasa Groupon sy LivingSocial dia nanondro olana maro: Ny fihenam-bidy takiana dia maranitra tokoa ka manimba ny orinasa. Ny fandoavam-bola amin'ny fihenam-bidy dia tsy tonga eo noho eo, ka miteraka olana ara-bola lehibe izay nandevina orinasa sasany. Ireo mpanjifa mahasarika azy ireo dia mivoaka irery ihany ary tsy miverina intsony. Masiaka ireo orinasa